मध्यरातमा वनका कर्मचारीमाथी तस्करद्धारा ढुंगामुढा : RajdhaniDaily.com -
Home प्रदेश मध्यरातमा वनका कर्मचारीमाथी तस्करद्धारा ढुंगामुढा
सप्तरी, राजविराज । कोरोना संक्रमणको समय पारेर सप्तरीमा विगत केही दिन यता काठ तस्करहरु सलबलाउन थालेका छन् ।
यसै क्रममा तस्करहरुलाई नियन्त्रणमा लिन मंगलबार मध्य राती गएका डिभिजन वन कार्यालय सप्तरीका टोली चढेको गाडीमाथी तस्करहरुले ढुंगामुढा गरि क्षति पु-याएका छन् ।
जिल्लाको उदयपुर–सप्तरी सीमामा रहेको गिद्धे सामुदायिक वन क्षेत्रमा तस्करहरुले काठ काटिरहेको सूचनाको आधारमा सहायक वन अधिकृत मनोज कर्णको नेतृत्वमा एक टोली राती २ बजे पुगेका थिए । जंगलमा पुग्दा तस्करहरुले काठ काटिरहेको र वनको टोली देख्ना साथ भागाभाग भएको थियो ।
डिभिजन वन कार्यालय सप्तरीका प्रमुख सन्तोष झाका अनुसार तस्करहरु अँधरोको फायदा उठाउँदै भागेपछि काटेको काठ लोड गरि फर्कने क्रममा दमौती जंगल क्षेत्रमा लुकेर बसेका तस्करहरुले ढुंगामुढा गरि आक्रमण गरेका हुन् ।
तस्करहरुले गरेको ढुंगामुढाबाट सहायक वन अधिकृत कर्ण चढेको बा.१झ. ७६२० नम्बरको गाढीमा क्षति पुगेको छ । यद्दपी त्यसमा सवार टोलीका सदस्यहरुलाई भने सामान्य चोट लागेको उनले जानकारी दिए ।
ढुंगामुढा गरेर अँध्यारोमा भागेका उनीहरुको पहिचान तथा खोजी कार्य जारि रहेको डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख झाले बतँएका छन् । टोलीले उक्त वन क्षेत्रमा काटेर लैजान ठिक पारिएको करिब २३ क्युविफिट २८ थान काठ बरामद गरेर ल्याएको उनले जानकारी दिए ।
पाँच दिन यता जिल्लाको दौलतपुर तथा बिरेन्द्र बजार वन क्षेत्रमा काठ तस्करीमा संलग्न एक महिलासहित चार जनालाई पक्राउ गरि कारवाही चलाइएको उनले जानकारी दिएका छन् ।
कोरोना महामारीकाबीच जिल्लाको वन क्षेत्रमा तस्करी बढ्न लागेपछि आफ्नो तथा सहायक वन अधिकृतको नेतृत्वमा वन सुरक्षा टोली गठन गरि विगत दश दिन यता रातीको समयमा वन क्षेत्रमा नियमित गस्ति थाली तस्करीमाथी कडाई गरिएपछि आफ्नो धन्दा नचल्ने भयो भन्ने चिन्ताले आक्रमण भएको उनको भनाई छ ।
काठमाडौं । नेपाल म्युजिक एन्ड फेसन अवार्ड सम्पन्न भएको छ । समारोहमा गीतसंगीत र म्युजिक भिडियोतर्फ विभिन्न ४७ विधामा अवार्ड प्रदान गरिएको थियो ।...
काठमाडौं । सरकारले आज शुक्रबारदेखि सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्ने भएको छ । सरकारले उपभोक्तालाई दैनिक उपभोग्य वस्तु सहज रूपमा उपलब्ध गराउन सुपथ मूल्य...
प्रमुख Dhruba Lamsal - September 6, 2020 0
प्रदेश ६ Sushila Bishwokarma - August 16, 2020 0
कालिकोट । निरन्तरको अविरल वर्षाका कारण बाढी र पहिरोले दुई सातामा कालिकोटमा २२ जनाको मत्यु भएको छ भने ७ जना बेपत्ता भएका छन ।...
Breaking News Roshan Shrestha - January 27, 2021 0